Mukuru wedare ramajistiriti kana kuti Chief Magistrate, VaMishrod Guvamombe, vambomiswa basa nhasi vachiferefetwa nemhosva yekuti vakapa mukana wekudzidzira basa rehugweta kuna VaSavior Kasukuwere naVaSupa Mandiwanzira avo vari kupomerwa mhosva dzehuori pavaive makurukota ehurumende.
Imwe mhosva iri kupomerwa VaKasukuwere ndeyekupa nzvimbo yekuvakira dzimba kuhama yaAmai Grace Mugabe, Amai Shuvai Junior Gumbochuma.
VaMandiwanzira vari kupomerwa mhosva yekuita kuhuori kuNetOne kambani yhurumende yembozhanhare. Vaviri ava vari kudzidzira hugweta pa University of Zimbabwe.
Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vaviri ava vange vari padare reCivil Court uye vakabva vamiswa kushanda svondo rapera naVaGuvamombe mushure mekunge vamwe vakuru vehurumende vagunun’una kuti sei vainge vapihwa mukana wekuenda kudare ivo vaine dzimwe nyaya dzehuori dzavari kutongerwa kudare ramejastiriti reRotten Row.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinoti dai paifungidzirwa kuti vaviri ava vaizokanganisa kutongwa kwenyaya dzavo, vangadai vakaendeswa kune mamwe matunhu ari pedyo.
Asi vamwe vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti izvi zvinonetsa zvekare sezvo pavakapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vagare kudzimba dzavo muHarare nekupota vachienda kumapurisa ari pedyo navo.
Gweta vachimbomirirawo mutungamiri wenyika uye vari vari nhengo yeZanu-PF, VaTinomudaishe Chinyoka, vanoti VaKasukuwere naVaMandiwanzira havaifanira kupihwa mukana wekudzidzira hugweta mumatare emuHarare asi kune mamwe matunhu.
Asi vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe, uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, vati havaone mhosva yakaparwa naVaGuvamombe vachiti vaviri ava vanokwanisa kudzidzira hugweta pasina dambudziko.